Ha na-ekepụta batrị ga-egbochi ikwughachi ọkụ nke Galaxy Note 7 | Gam akporosis
Ebe ọ bụ na a manyere ụlọ ọrụ South Korea Samsung ka ọ kwụsịtụ mmepụta na ahịa nke ngwaọrụ Galaxy Note 7, yana ịga n'ihu nchịkọta ha, ọtụtụ ndị na-emepụta ekwentị mkpanaaka chọrọ iji hụ na ngwaọrụ ha na-ekesa dị mma maka ndị ahịa gị.
Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ, dịka LG, na-anwale batrị ha n'ọnọdụ siri ike, iji hụ na oke ọkụ ma ọ bụ ọkụ adịghị. Agbanyeghị, ọ ga - ekwe omume na site ugbu a gawa, na ọrụ ọrụ ndị otu nyocha na Mahadum Stanford mere, ndị na - emepụta nwere ike ichegbu onwe ha maka ihe akụkụ ha na - agbawa
1 Usoro batrị ọhụrụ nke ga-egbochi ọkụ na mgbawa na mberede
2 Mkpa ọganihu a
Usoro batrị ọhụrụ nke ga-egbochi ọkụ na mgbawa na mberede
Maka ndị anyị bụ ndị edemede, ọ na-esiri anyị ike ịghọta nkọwapụta, agbanyeghị, ọrụ ahụ dị ka ọ dị mfe, ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ. Ndị otu Mahadum Stanford arụọla a lithium ion batrị gụnyere triphenyl phosphate capsule achọtara n'ime mmiri electrolyte batrị ahụ. Ọ bụrụ na okpomọkụ dị n'ime batrị ahụ ruru 150 Celsius C, capsule ahụ ga-agbazekwa ma hapụ triphenyl phosphate.
Triphenyl phosphate (TPP) bụ ụdị Ire ọkụ retardant chemical nke nwere ike imenyụ batrị ọkụ na 0,4 sekọnd, dị ka otu ndị nyocha ahụ gaara achọta. Ọ bụ ya mere a nchebe dị mkpa nke ukwuu Ebe ọ bụ na batrị lithium-ion na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ ha dịkwuo elu, yabụ mmebi nrụpụta dị mfe ma ọ bụ ntụpọ nrụnye nwere ike ibute ha ọkụ, ihe anyị hụbururịrị na Galaxy Note 7.
Nnyocha ahụ, nke otu ndị nyocha sitere na Ngalaba Sayensị nke Sayensị na Injinia, Ngalaba nke Akụrụngwa Chemistry na Institute of Sciences and Energy, ha niile bụ ndị Mahadum Stanford. bipụtara na mbipụta dijitalụ nke akwụkwọ akụkọ sayensị mara mma Sayensị.
Mwepu ahụ, nke ndị otu egwuregwu kwadebere Kai Liu, Wei Liu, Yongcai Qiu, Bio Kong, Anyanwụ nke Yongming, Chidinma Chen, Denys Zhuo, Dingchang Lin na Yi Cui, na achikota nkowa nke uzo ohuru na nchedo ohuru a:
Agbanyeghị ike batrị na-aga n'ihu na-abawanye, nchedo nchekwa (dịka ọmụmaatụ, ọkụ na mgbawa) metụtara na iji nnukwu ihe ọkụkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ga-abụ nnukwu nsogbu, na-egbochi ngwa ngwa ndị ọzọ nke batrị ahụ. Ọgbọ na-esote ike dị elu batrị. Anyị arụpụtara ihe ọhụrụ "smart" na - abụghị kpara electrospun separator na thermally rụọ ọrụ ire ọkụ retardant Njirimara maka lithium ion batrị. Encapsulation nke ire ọkụ n'ime envelopu polymeric na-echebe egbochi mgbasa kpamkpam nke ihe na-egbu oge na electrolyte, nke ga - enwe mmetụta na - adịghị mma na arụmọrụ batrị. N'oge nkwuputa ọkụ nke batrị lithium-ion, shei nchebe nke polymer ga-agbaze, kpatara mmụba nke okpomọkụ, a ga-ahapụkwa onye na-enwu ọkụ, wee si otú a na-egbochi ọkụ nke electrolytes na-enwu ọkụ.
Schematic nke "smart" electrospun separator with ire ọkụ retardant kwes tripping Njirimara nke lithium-ion batrị | Echiche: Sayensị
Mkpa ọganihu a
Ọ bụ ezie na Samsung erubeghị ọkwa ahụ nsonaazụ Site na nyocha ya, ụbọchị ole na ole gara aga, ụlọ ọrụ mgbasa ozi Reuters kwupụtara na, mgbe ha nyochachara ule dị iche iche ebe ọkụ mepụtagoro, enweghị ike ịkọwa ihe kpatara ọkụ ndị ahụ site na nsogbu metụtara ma ọ bụ na ngwanrọ ahụ ma ọ bụ na imewe ngwaike, ya mere ntiwapụ na ọkụ nke Nkọwa 7 bụ n'ihi nkwarụ na batrị ya. Mara ọnọdụ a, Nkà na ụzụ batrị ọhụrụ a nwere ike inye aka gbochie ụdị ihe ọghọm ga - eme n’ọdịnihu, tụmadị ka batrị lithium-ion gbasawanyere n’ọtụtụ ngwaahịa, dịka ụgbọ ala eletrik..
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ha na-ekepụta batrị ga-egbochi ịmegharị ọkụ nke Galaxy Note 7
A ga-ekpughe Samsung Galaxy S8 na Machị 29 wee bido na njedebe nke Eprel na $ 849